पार्टी फु’टे कांग्रेस सहितको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना, ! – Life Nepali
पार्टी फु’टे कांग्रेस सहितको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना, !
काठमाडौँ। नेकपा नेताहरु हतारमा निर्णय गर्छन्, फुर्सदमा झगडा। पछिल्ला घ’टनाक्रमले यो कथनलाई अझ पुष्टि गर्छन्। हतारमा पार्टी एकता’ गरेर हुनुपर्छ, यो प्रक्रियाले अझैसम्म’ पूर्णता पाएको छैन। बरु सत्ताको छिनाझपटी सतहमा’ देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपा सचिवालयका शक्तिमान ९ नेताहरु समीकरण’ फेरबदलमार्फत सत्ताको जो’डघटाउमा लागेका छन्। फलतः दुईतिहाइ नजिक भएर पनि सरकार अ’स्थिर देखिएको छ।
पहिलो बरियताका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने स्वभाविक चा’हना छ। पु’रानो सह’मतिबाट एक कदम पछि हटेर, प्र’चण्डलाई का’र्यकारी अध्यक्ष दिएर ओलीले था’मथुम पारे। वामदेव गौतमलाई स’त्तायात्रामा हिँ’डाउने, चा’हना नहुँदानहुँदै ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए। ओली अहिले, त्यही पासोमा, फसेको टिप्पणीसहितको खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा माधव बस्नेतले लेखेका छन्। स्रोतका अनुसार ओली यतिबेला केही समय’ लचक नै भएर प्रचण्ड ग’ठबन्धनलाई’ फुटाउने वा गलाउने दाउमा छन्।
तर अचा’क्ली नै गर्दै गए र स्वा’स्थ्यले साथ दि’इरहे पार्टी फु’ट्छ, भने पनि त्यसको सामना गर्ने मानसिकतामा समेत उनी पुगेका छन्। त्यसैको लागि उनले कांग्रेस नेताहरुसँगको भेटलाई सघन बनाएको स्रोतको दाबी छ। ओलीसँगको भेटपछि कां’ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘उस्तै परे कांग्रेस सरकारमा पनि जान स’क्छ’ भनेको स्रोतको दा’बी छ। पार्टी विभाजनको अ’वस्था आइलागे पूर्वएमालेको सबैजसो हि’स्सा आ’फैँसँग रह’ने ओलीको वि’श्वास छ। त्यसपछि कांग्रेससँगको सह’कार्यमा सरकारको नेतृ’त्व गर्ने ओलीको यो’जना छ।
Previous मोडल खुस्बु ओलीलाई दुई वर्ष कै’दको फै’सला
Next नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित